Cost of textbook : u - Engelska - Burmesiska Översättning och exempel
You searched for: cost of textbook : usd50 per textbook (Engelska - Burmesiska)
However, the mayor has yet to provide any details about the start or the financial cost of the project.
ဒါပေမဲ့ မြို့တော်​ဝန်​က ဘယ်​တော့​စ​လုပ်​မယ်​ဆို​တာ​နဲ့ ဘဏ္ဍာ​ရေး ကုန်ကျ​စရိတ်​အသေး​စိတ်​ကို မ​ပေး​သေး​ပါ​ဘူး။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတစ်ဝှမ်း ကောလိပ်များနှင့် တက္ကသိုလ်များကို ကျောင်းသားများအား ကျောင်းလခ၊ အခန်းနှင့် ဘုတ်အဖွဲ့အတွက် ကုန်ကျစားရိများအတွက် ငွေပြန်လည်ထုတ်ပေးရန် တောင်းဆိုထားသည်။
BGI အဖွဲ့အစည်း တည်ထောင်သူ Wang Jian က ကြီးကြပ်၍5ရက်ကြာ အချိန်ယူ တည်ဆောက်ထားသည့် ပုံစံငယ်အရ ဤစမ်းသပ်နိုင်စွမ်းကို လက်တွေ့အသုံးမချနိုင်လျှင် ဟူဘေး (Hubei) ၌ ရောဂါကူးစက်မှုများသည် 47 ရာခိုင်နှုန်း ပိုမိုမြင့်မားလာနိုင်ပြီး အသွားအလာကန့်သတ် စောင့်ကြည့်မှုကို ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်ပေးရန် ကုန်ကျစရိတ်သည် နှစ်ဆမြင့်တက် လာနိုင်သည်ဟု ပုံစံငယ်ပုံဖော်ခြင်းက ဖော်ပြထားသည်။
Given the estimated cost of such project (estimated at 166 million euros or 230 million US dollars for the system in La Paz) and the rampant poverty in the city, many wonder whether suchaproject is appropriate.
ဖြစ်​နိုင်​သည့် ကုန်ကျ​စရိတ်​နှင့် (ခန့်​မှန်း လ​ပက်(ဇ်)တွင် ယူ​ရို​ငွေ ၁​၆⁠၆​သန်း (သို့) အမေ​ရိ​ကန်ဒေါ်​လာ သန်း ၂​၃​၀​ကုန်ကျ) ထူပြော​သော ဆင်းရဲ​မှု​ကြောင့် လူ​အများ​စု​က ထို​ကဲ့သို့​သော စီမံ​ကိန်း​မျိုး ဆောင်ရွက်​ရန်​မှာ သင့်လျော်​၏​လော​ဟု တွေးတော​နေ​ကြ​သည်။
papunta ka palang pabalik na ako (Tagalog>Engelska)ha anticipato il parto (Italienska>Engelska)pakiusap (Tagalog>Engelska)a t il fait beau? (Franska>Engelska)in the meantime (Engelska>Tagalog)paip poli (Malajiska>Kinesiska (förenklad))patient (Engelska>Kurdiska)which locality do you live in china (Engelska>Hindi)tűzparancs (Ungerska>Engelska)bata palang ako pangarap ko na yan (Tagalog>Engelska)उसके पास एक कलम है (Engelska>Hindi)gel (Latin>Engelska)what is verdict (Engelska>Tagalog)ano ang conceive (Engelska>Tagalog)keliaujame (Litauiska>Slovakiska)邻近美国地图 (Kinesiska (förenklad)>Malajiska)annuleren (Holländska>Svenska)lidah (Indonesiska>Koreanska)kuaför (Turkiska>Tyska)organum virorum (Latin>Engelska)kain perca (Malajiska>Engelska)i wonder how cold it was (Engelska>Afrikaans)abbigliamento (Italienska>Slovakiska)menyedut udara (Malajiska>Kinesiska (förenklad))coloured (Engelska>Grekiska)